Hawlaha fulinta qabow iyo kuleylka: maxay saadaalinayaan midba midka kale? | Tababarka Garashada
Hadda waa la wada og yahay oo waa la ogyahay in hawlaha fulintu ay si dhow isugu xidhan yihiin (oo ay weheliyaan sirdoonku) dhinacyo badan oo nolosheena ah: waxaan haynaa xog ku saabsan saadaalinteeda marka loo eego waxqabadka tacliinta, ilaa creativeness, xirfadaha akhriska iyo fahamka qoraalka, at xirfadaha xisaabta, ilaa afka iyo dhammaangardarada.
Caadi ahaan, si kastaba ha ahaatee, marka la lafagurayo saamaynta hawlaha fulinta ee dhinacyada muhiimka ah ee nolosheena, cilmi-baaristu waxay inta badan diiradda saartaa waxa loogu yeero howlaha fulinta qabow, taas oo ah, in badan oo "garasho" ah oo ka madhan caadifadaha (tusaale ahaan, the xusuusta shaqada, dabacsanaanta garashada iyo xakamaynta); wax aad u yar ayaa lagu hadlaa halkii loogu yeeri lahaa hawlaha fulinta kulul, taas oo ah, kuwa khuseeya ujeeddooyinka hagaya go'aannadayada (gaar ahaan haddii ay ku qotomaan dhinacyo shucuur iyo dhiirigelin leh), xakamaynta shucuurta, raadinta qancinta iyo awoodda dib u dhigistooda .
2018, Poon sidaas darteed waxay go'aansatay inay tijaabiso koox dhallinyaro ah marka loo eego barashada dugsiga iyo marka la eego fayoobaanta nafsiyadeed iyo awoodda ay ula qabsan karaan; isla mar ahaantaana, isla dhallinyaradan waxaa lagu soo rogay qiimaynta hawlaha fulinta, qabow iyo kulayl labadaba, iyada oo loo marayo baytar caadi ah.
In kasta oo uu qoraagu ku sheegay maqaalkiisa, dhammaan tijaabooyinka waxaa loo adeegsaday in lagu qiimeeyo qabowga (xakamaynta feejignaanta, xakamaynta xusuusta shaqada, dabacsanaanta garashada iyo qorshaynta) iyo kulaylka (go'aan qaadashada) si liidata ama aan haba yaraatee isku xirnayn r = 0,18!); tani waxay noo oggolaanaysaa inaan malo -awaalno, si waafaqsan waxa Miyake iyo saaxiibbadiis ku doodeen, in qaybaha kala duwan ee hawlaha fulintu ay yihiin kuwo aan kala go 'lahayn.
Dhab ahaantii dhinac aad u xiiso badan ayaa ah, saafiga saamaynta heerka aqooneed, hawlaha fulinta qabow waxay saadaalinayeen waxqabadka tacliinta halka hawlaha fulinta dabacsan cadeeyay in la saadaaliyola qabsashada nafsaaniga ah.
Hawlaha fulinta qabow iyo kulaylka, markay u shaqaynayaan si isku mid ah, markaa waxay umuuqdaan inay yihiin laba dhisme oo kala duwan oo leh muhiimad kaladuwan marka loo eego duruufaha nolosha ee kala duwan.
Ugu dambayntii, xog kale oo xusid mudan waxay khusaysaa isbeddelka dhibcaha imtixaannadii loo adeegsaday cilmi -baadhistan, laga bilaabo 12 ilaa 17 sano jir: xusuusta hadalka afka waxay muujinaysaa koritaan joogto ah oo leh da'da (marka la eego baaxadda daraasaddan), sidoo kale waxay muujinaysaa korodh degdeg ah oo ku dhawaad ​​15 sano jir ah; sidoo kale xakamaynta feejignaanta u muuqda koritaan joogto ah kooxdan da'da ah; halkaas dabacsanaanta garashada waxay u muuqataa inay si joogto ah u kordhayso ilaa da'da 16 jirka; si la mid ah, kartida Iscelin waxay muujineysaa kor u kac xoog leh oo ka yimid 13 illaa 16; halkaas qorshayntaugu dambayntii, waxay muujinaysaa koritaan joogto ah oo da 'ah, taasoo muujinaysa si kastaba ha ahaatee kororka ugu sarreeya ee qiyaastii 17 sano jir ah.
Aad bay uga duwan tahay isbeddelka hawlaha fulinta dabacsan maaddaama isbeddelka laga bilaabo 12 illaa 17 sano uu yahay mid dawan (ama rogay "U"); si kale haddii loo dhigo, qiyaastii 14-15 sano jir, bandhigyo ka xun ayaa lagu arkay (cilmibaaristan) marka loo eego da'da hore iyo tan xigta; si ka sii hufan, kooxdan da 'ahaan waxaa jira khatar aad u weyn oo halis ah iyo raadinta qanacsanaan yar laakiin degdeg ah (marka la barbar dhigo kuwa waqtiga fog laakiin ka weyn).
Marka la eego hawlaha fulinta qabow, xannibaadda, xusuusta shaqada iyo dabacsanaanta garashada ayaa u muuqata inay qaangaadhay ka hor intii qorshaynta; sidaas darteed waxaa loo qaadan karaa in tii hore (ka sii asaassan) ay saldhig u tahay horumarinta kan dambe (kala sarraynta).
Marka la barbardhigo hawlaha fulinta kulul, qaabka “U” ee la rogay ayaa sharxi kara kordhinta u janjeedha dabeecadaha halista ah ee inta badan lagu arko qaangaarnimada.
Guud ahaan, imtixaannada hawlaha fulinta qabow iyo kuwa hawlaha fulinta kulul waxay u muuqdaan inay si dhab ah u cabbirayaan dhismayaal kala duwan: kii hore, dhab ahaantii, wuxuu u muuqdaa inuu aad ula xiriiro gaaritaanka ujeeddooyin badan oo "garasho" ah (tusaale, waxqabadka dugsiga), kuwa dambe waxay aad ula xiriiraan ujeedooyin bulsho iyo shucuur badan.
Aragtida isku dhafan ee hawlaha fulinta ayaa ah mid faa'ido leh, marar badanna aan isku dheelitirnayn gaar ahaan qaybaha badan qabow.
Hawlaha fulinta “Programming”: saamaynta koodh ku saabsan qorshaynta iyo ka -hortagga dugsiga barbaarinta
Hawlaha fulinta ayaa saadaaliya waxqabadka dugsiga
Xidhiidhka ka dhexeeya hawlaha fulinta iyo luuqadda da'da dugsiga ka hor
Is-bedbedelka garashada iyo xirfadaha xisaabta
Poon, K. (2018). Hawlaha fulinta kulul iyo qabow ee qaangaarnimada: kobcinta iyo ku biirinta natiijooyinka horumarineed ee muhiimka ah. Xuduudaha hore ee cilmu-nafsiga, 8, 2311.
howlaha fulinta, hawlaha fulinta dabacsan, hawlaha fulinta iyo la qabsiga maskaxda, hawlaha fulinta iyo waxqabadka tacliimeed, howlaha fulinta qabow, hawlaha fulinta qabow iyo kulul
Hawlaha fulinta qabow iyo kuleylka: maxay saadaalinayaan midba midka kale?2021-08-232021-08-23http://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2017/08/nuovologo_87e9aa904327d53301f73f9191e17e49.pngTababbarka garashadahttps://www.trainingcognitivo.it/wp-content/uploads/2021/08/funzioni-esecutive-fredde-e-calde.-cosa-predicono-di-diverso-tra-loro.jpg200px200px
Xiriirka ka dhexeeya sirdoonka dareeraha iyo hawlaha fulintaMaqaallada, Hawlaha Fulinta, Hawlaha Fulinta, Waxgaradka